“अशोक लेलैण्ड र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लि.बिच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर” « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
“अशोक लेलैण्ड र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लि.बिच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर”
काठमाडौं । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लि. द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (महेन्द्रनगर प्रधान कार्यालय रहेको) बिच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरु राम जैसी र आईएमई मोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।